“ကဲ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? ……………… ဟင်။´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ကဲ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? ……………… ဟင်။´´
“ကဲ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? ……………… ဟင်။´´
Posted by ခင်ခ on Apr 25, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Myanma News | 38 comments
မန္တလေးမှာ မနေ့က ငွေကျပ် ၁၅၀၀ တန် မိုဘိုင်းဖုန်းကဒ်တွေ ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေမှာ အစိုးရက တန်းစီပြီး မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်း(အိမ်ထောင်စုစာရင်း) ပြကာ ဦးရာလူစနစ်နဲ့ ရောင်းပေးတယ်၊ ရောင်းပေးတဲ့ကဒ်အရေအတွက်ထက် ၀ယ်လိုသူဦးရေက များပြားနေတာ တွေ့ရတယ်။ ငွေကျပ် ၁၅၀၀ နဲ့ ဆင်းကဒ်(မိုးဘိုင်းဖုန်းကဒ်) ရမယ်ဆိုတော့ လိုချင်ကြတဲ့သူ တွေများတာပေါ့။ ဟိုးတုန်းကဆို အိမ်မှာဖုန်း တပ်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာ အတော်မလွယ်ရေးချ မလွယ်တဲ့ကိစ္စလေ။ နောက်ပိုင်း ဆယ်လူလာဖုန်းတွေ၊ လက်ဆွဲခြင်း ဖုန်းတွေ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ ပေါ်ခဲ့ပေမယ့် အစိုးရထုတ်ရောင်းဈေးတင် ဆယ်ဂဏန်းကျော် သိန်းချီနေခဲ့ကြတာကိုး။
ဒါကြောင့်လည်း ငွေကျပ် ၁၅၀၀ နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းကဒ်ကိုရောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ အိမ်မက်မက်လိုက်ကြတာ ဒု နဲ့ ဒေး ပေါ့။ ဒါပေသည့် တကယ်တမ်း စတင်ရောင်းပြီလည်းဆိုရော ခွဲတမ်းနဲ့မို့ မဲနှိုက်ရောင်းတဲ့မြို့ကရောင်း၊ ဦးရာလူစနစ် တန်းစီစေပြီးရောင်းတဲ့မြို့ကရောင်းနဲ့ အစိုးရက အဲလိုစနစ်တွေဖော်ဆောင်လိုက်ရော မနေ့က မန္တလေးမှာ ထို မိုဘိုင်းဖုန်းကဒ် ဈေးကွက်တစ်ခု အခုလိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါက ရရှိတဲ့ အစိုးရရောင်းဈေး ငွေကျပ် ၁၅၀၀ ဖုန်းကဒ် ပြန်ရောင်းရင် ဖုန်းဆိုင်တစ်ချို့က ကျပ် ၃၀၀၀၀ နဲ့ကောက်ဝယ်ပြီး၊ အဲ ဒီဖုန်းဆိုင်တွေ ငွေကျပ် ၅၀၀၀၀ နဲ့ ပြန်ရောင်းကြပါတယ်တဲ့။ ကဲ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? ……………… ဟင်။
ခေတ်အဆက်ဆက် တန်းစီး၊ မဲနှိုက်စနစ်ကို မြန်မာပြည်က ဘယ်အစိုးရဘဲဖြစ်ဖြစ် ပျောက်ပျက်မသွားစေဘဲ ရိုးရာအမွေအနှစ်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စဲမို့ ဂုဏ်ယူရမှာလား ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပြောပါအုံးလို့ ………..။
ဒါ တမဝါရမ ရှနစ် လို့ ထော်ဒလားဟင်???
တမဒဂျီး ကောင်းမှုလား ???
ကန်တော့ပါတယ် ကိုခ။ မနေ့ကတည်းက ဖတ်ပြီး စိတ်တိုနေလို့ပါ။
KZ ရေ မြန်မာပြည်သူမှန်ရင် သည်းခံလော့ သည်းခံလော့ ငါရှင် ။ ဒါလည်း ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်ပေးခဲ့တဲ့ စကားဖြစ်ပေတည်း။
ငါတို့ စနစ်မပြောင်းသေး အရင်လိုဘဲ ဆိုတာကို ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွား ကြီး သက်သေပြပေးနေတာလား။
တစ်ခုခုပါဘဲ ကိုခ ရေ။
ဒီလိုလူတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား မဖယ်နိုင်သ၍ကတော့ ထူးမခြားနားပါတ်ပျိုး ကိုသာ ငြီးနေပါတော့။
မဆလတခေတ်လုံးနဲ့.. န၀တ..နအဖတခေတ်လုံး.. စစ်သားတွေအရပ်အလုပ်တွေထဲသိပ်ထည့်လာလိုက်တာ.. အခု.. မန်နေဂျာ..စာရေးစာချီအဆင့်ထိ..စစ်သားတွေရောက်ကုန်တာမို့.. အဲဒီဘာမှမတတ်တဲ့သူတွေက.. အတတ်ဆုံးတွေဖြစ်ပြီး. သူတို့ဖယ်လိုက်ရင်.. ဘာဘာဘာမှ..ပိုမတတ်တဲ့သူတွေပဲ.. ကျန်တော့တာ..
အစိုးရမှာ.. တကယ်တတ်သိ.. စေတနာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းမကျန်သလောက်ဖြစ်နေပြီ..။
၂၀၁၅မှာ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့ရင်တောင်.. သူ့မှာ လူမရှိတာမို့.. မဖြစ်ရေးချမဖြစ်…
အာဖရိကနိုငငံတချို့လို.. အင်္ဂလန်..ဥရောပကလူတွေကို.. လစာမြက်မြက်ကလေးပေးပြီး.. အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းထဲ.. ခေါ်ခိုင်းထားရမယ့်ဘ၀ဖြစ်လို့နေပါပြီ..
ဒီလောက်ကြီးတော့ မဆိုးပါဘူး သူကြီးရယ်။
NLD မှာ နဲ့ အသက်ငယ်ငယ် နောက်တက်တွေကိုတော့ မသိဘူး။
ကျွန်မတို့ အရွယ်ထဲမှာတော့ အင်မတန်တော်တဲ့၊ လုပ်နိုင်တဲ့ သူတွေ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ချောင်ထိုးခံ ထားရတာအများကြီးပါ။
တစ်ချို့ စစ်တပ်ထဲမှာတောင် ရှိပါတယ်။
အများစုကတော့ အကြောက်တရားနဲ့ ပါးစပ်ပိတ် နေနေကြတာများတယ်။
သူတို့ကလဲ လူတန်းစေ့ နေနိုင်နေတာကိုး။
အရီးရေ သိတော့သိပေသိ မသိချင်ယောင်ဆောင်သူရယ်…… ဆို သလိုနေမှာပေါ့။
ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရတိုင်း တန်းစီ စနစ်ဖြစ်လေကြိုက်လေနေမယ်ထင်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က သမ၀ါယမ မှာ အိမ်ထောင်စု စာအုပ်နဲ့ ဆီ ဆန် ဆပ်ပြာ စတာတွေအတွက် တန်းစီခဲ့ရတယ် ( မဆလ ခေတ်ပေါ့ )
ပြီးတော့ ကုန်တိုက်တွေမှာ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းရဖို့ တန်းစီပြီး ၀ယ်ခဲ့ရတယ် ( မဆလ ခေတ် )
အဲ အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့ ရ၀တ ရုံးမှာ ဆန်တွေ စာအုန်းဆီတွေ ဝေလို့ တန်းစီခဲ့ရပြန်တယ်။ ( န၀တ တက်ပြီး သိပ်မကြာမှီပေါ့ )
နောက်ပြီး မန်းရောက်တော့ ဆိုင်ကယ်လေးဓာတ်ဆီထဲ့ဖို့ ဆီဆိုင်မှာ တန်းစီရပြန်တယ်။ ( န၀တ ခေတ် )
ဟော အခု ဒီမို အစိုးရခေတ်ကြပြန်တော့ မပျောက်နိုင်သေးဘဲ တန်းဖိုးနည်း ဖုန်းကဒ်အတွက် တန်းစီ ကြစေတဲ့လေ။
ခေတ် အဆက်ဆက် တန်းစီလျှက် ပေါ့ဗျာ။
အဲ ဒါပေမယ့် တန်းစီ ကို ပြောင်းပြန်လုပ်လို့ စီတန်း လှည့်လည်တာကြတော့ အမုန်းပွားပြန်ရော အရီးရေ။
သူဂျီးမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆို စစ်ကြိုခေတ်က ငိုချင်းငြီးသလို ငြီးရတော့မယ်နော်၊
ဒို့ မြန်မာပြည်ကြီးတော့ ရေစုန်မျောပါပေါ့လေ……..
အဲဒီ..”တန်းစီ”..”စီတန်း” အိုင်ဒီယာနဲ့.. ကာတွန်းဆွဲဖို့ကောင်းတယ်..
phoe cho says:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆု့ပေါင်းများစွာရခဲ့တဲ့(သံမတ)အဓိပါယ်မသိ. တဲ့ လူကြီးကို ဝိုင်ပြီးကျေးဇူးတင်လိုက်ပါဦး။ သာဓု သာဓု သာဓု
ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ဒါကြီးကို နဲနဲလေးမှ သဘောမကြဖူး……
GSM တွေပေးရမှာကို CDMA800 ပေးတဲ့ကိစ္စ ကတည်းက စပီး သဘောမကျတာ…..
လူတွေကလည်း အင်တာနက် ၂၄ နာရီကို Data Plan နဲ့ ပေးမယ့် ကိစ္စ….
မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုပီး ၀ိုင်းကန့် ကွက်တယ်…… အခုဆို Data Switch တွေ ပိုင်ရဖွင့်ရ အားကြီး ဇယားရှုပ်တယ်……
CDMA800 ကို စပေးကတည်းက ကန့် ကွက်ရမှာကိုး ဘယ်သူမှ မကန့် ကွက်ဖူး……
တုံးတယ်လို့ ပြောလည်း ခံရမှာပဲ……….
ညံ့ကြေးလို့ ပြောလည်း ခံရမှာပဲ…………….
Huawei ကုပ္မဏီကြီးကို လုပ်ကျွေးတယ်ဆိုလည်း မမှားဖူး……
ရှင်းရှင်းပြောရရင် အခုလိုဖြစ်လာတာကို နဲနဲလေးမှ မအံ့သြဖူး……
အစိုးရကလည်း ပိုက်ဆံမရှိ လို့GSM တိုင်တွေ ထပ်မစိုက်နိုင်သေးလို့ …….
CDMA800 ကို CDMA450 ထဲ ထည့်သုံးပီး သုံးကြလို့ ပဲပြောမှာပေါ့……
GSM ငါးတိုင်လောက် စိုက်ရရင် CDMA တတိုင်ဆို ရနေပီကိုး…….
ပီးတော့ ဖုန်းခွံကလည်း ထောက်ပံမယ့်သူရှိလို့ ……………………….
ဒါကြီးက ဖြစ်ကို မဖြစ်ခဲ့သင့်တာပါ………..
ကိုတိမ်မည်း ရေ အခု ၁၅၀၀ CDMA က အရင် CDMA တွေရဲ့ တာဝါတိုင်စနစ်နဲ့ မတူဘူးတဲ့။
သူရဲ့လှိုင်းက သီးခြားဆိုဘဲ။ ၁၅၀၀ CDMA လိုင်းမိတဲ့ဒေသတိုင်းမှာ ယခင် CDMA တာဝါမရှိရင် မမိပါဘူးလို့ သိရပါကြောင်းဗျ။ ဖုန်းလိုင်းအမျိုးအစား များစွာသုံးသော မြန်မာနိုင်ငံလို့ အာစီယံမှာ ဂုဏ်ယူစရာတောင် ဖြစ်နေပါပြီလေ။
နောက်တစ်ခုစဉ်စားမိတာက ၁၅၀၀ ဈေးဆိုတော့ လူတန်းစားမရွှေးနောင်ကိုင်နိုင်လာမယ်လေ။
အဲဒီမှာ တစ်ခုခုဖြစ်လို့ ဖုန်းလိုင်းတွေဒေါင်းချင်ရင် သီးခြားဝေ့နဲ့ ရပ်တည်လို့ ထို ၁၅၀၀ နဲ့ဆိုင်တဲ့ switch တွေဘဲ ပိတ်လိုက်ရင်ရပြီလေ အဲလို အဲလို တွေများနဲ့များ……..။
အခု ဖုန်းရောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကို ဆက်သွယ်ရေးကမလုပ်ဘဲနဲ့ ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရတွေကို ချပေးတယ်
ဒါကိုက နေရင်းထိုင်ရင်း အလုပ်တစ်ခု ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်သလိုပဲ
ဘယ်သူမဆို ဝယ်နိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ ချပေးပြီးတော့ လုံလောက်အောင်လဲ မထုတ်နိုင်၊ လိုင်းလဲ ချဲ့မပေးနိုင်ဘူး
ဒါကြောင့် ခွဲတမ်းစနစ်တွေနဲ့ ပေးရတဲ့အခါ မဲတွေ၊ တန်းစီရတဲ့စနစ်တွေ မထည့်ဘဲနဲ့ ရောင်းဖို့နည်းက ရှာမရတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါတွေကို တကယ်လုပ်နိုင်မယ့် ဝယ်လိုအားနဲ့လောက်အောင် ဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် provider တစ်ခုခုကိုလွှဲပေး
အခုလဲ provider တွေ ခေါ်နေတာပဲကို
ဒါဆို ပြဿနာ သိပ်မရှိတော့ဘူး ဖြစ်သွားမယ်
အခု လုပ်ပုံက ရှိတာနဲ့ ဖြစ်သလို လုပ်ပေးပုံ ပေါက်နေတယ်
(အခု လုပ်ပုံက ရှိတာနဲ့ ဖြစ်သလို လုပ်ပေးပုံ ပေါက်နေတယ်)
အခုမှ သိတာလား ကိုမာဃရေ ၊ ကျွန်တော်တို့ကတော့ သိခဲ့တာကြာပေါ့ကွယ်။
စေတနာလေးများ ထည့်မလားလို့ စောင့်ကြည့်နေမိတာပါဗျာ
အဲဒီလူတွေ စိတ်ရင်းကို မကောင်းဘူး :chee:
ဘာတွေလဲဂျာ.. ခင်ညားတို့က တူများဆိုတယ်ပြောချင် ကြတာဂိုး
ခုဟာက အနော်တို့ ပြည်တူတွေ အတွက် ဂွင်ရအောင် ဖန်ပေးလိုက်တာဂျ..
တူတို့က အတားစားလို့ဝတွားလို့ မင်းတို့ဒွေ အရိုးကိုက်ကြဒဲ့..
တမဒဂျီးစေတနာကို အတိအမှတ်လေးတော့ ပြုကြပါကွယ်ရို့
၁၅ဝဝ ကို ၃ဝဝဝဝ နဲ့ရောင်းတော့လဲ ဘာဖြစ်လဲ ၁၇ဝဝဝဝ တောင် သက်သာနေသေးတယ်..
ဆြာအုပ်ရေ အတော်လုပ်ပါ၊ အဲလို တိုးစားတဲ့ဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်ရှိပေတာကို သတိမပြုမိလိုက်ဘူးဗျ။
အစက ၅၀၀၀ တန်ဖုန်းလိုချင်လှချည်ရဲ့ဆို
၁၅၀၀ ဆိုရင် အဆင်မပြေမှာစိုးလို့
ကိုခင်ခရယ် အဲဒါကတစ်ကယ်ကြီးလား ……။ ကျနော်တောင် တန်းစီးပြီးရောင်းလိုက်ချင်သေး….။ ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ အဲဒိ 1500 ဖုန်းကိုစိတ်မ၀င်ဟားဖူးဗျ….။ နှစ်သိန်းတန်ဖုန်းကိုပဲ တစ်သိန်းနှစ်သောင်းနဲ့ တစ်သိန်းခွဲကြားထားပြီး အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်နေတယ်…….။ 1500 ဖုန်းက ပရီပိတ် ကဒ်ပလည်း သီးသန့်ဝယ်ရမှာ တစ်လ နှစ်ထောင့်ငါးရာဖိုးမှမသုံးရင် ပိတ်ဦးမှာ ပြီးတော့ ဒီမှာ အတင်းစကားဖြစ်နေတာက အဲဒါ ဦးပိုင်က လုပ်တာတဲ့ ဦးပိုင်ဖုန်းတဲ့ ဒါကြောင့် ကိုင်ချင်တဲ့သူသိပ်မရှိကြဘူး…။
ကိုနေဝန်းနီရေ အမှန်သတင်းပါဗျ။ တကယ်ပါ။
25.4.2013 တန်ခူးလပြည့် နေ့ လည် ၃နာရီခန့် အချိန် တွင်
၂၆လမ်း ၈၂လမ်း SYတိုက်ခန်းအောက်နားတွင် ၁၅၀၀ကျပ်တန် ဆင်းကဒ် ဝယ်ဈေးမှာ ၇သောင်းကျပ်
ကိုပေရေ ဟုတ်လား ဈေးကလည်းကောင်းပ။ မနေ့က ကျွန်တော်တို့ဘက် ၆၂ လမ်းက ဆိုင်မှာ ငါးသောင်းနဲ့ ရောင်းနေလို့လေ။
လိုအပ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ . . ။ ကံစမ်းကြတာ ပေ့ါ . . ကံကောင်းတော့လဲ 1500 ရင်းပြီး 30000 ရတော့ . . . မိသားစု လိုတာလေးဖြည့်ဝယ်ရတာပေါ့။ ဘာပဲ ပြောပြော နေရင်းထိုင်ရင်း 28500 ရတာတော့ မနည်းဘူး ပေါ့။ နောက်လ . . နောက်လ တွေမှာတော့ အဲ့လောက် ပေါက်ဈေး မရှိတော့ပဲ . . သွေးအေးသွားကြတော့မှာပါ။
ကိုလုလင်ရေ အမှန်ပါဘဲ ပေါ်ဦးပေါ်ဖျားရယ်။ လိုချင်သလောက်မရနိုင်သေးတာရယ်က
ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အဲ့လိုလုပ်တာလဲဆိုတာ ဥာဏ်မမီပေမယ့်… 1500 တန် ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ နာမည် လိုချင်တာနဲ့ပဲ လုံလောက်အောင် မလုပ်ပေးနိုင်ခင် ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာကတော့.. -င်မနိုင်ဘဲ ပဲကြီးဟင်းစား သလို ဖြစ်နေတယ်… အချစ်မခံရဘဲ တောက်မြင်ကတ်ခံရတယ်..
ကန်တော့နော်..လေးလေး… စိတ်ထဲ နည်းနည်းချဉ်လို့…
မွဲတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ နေမိတဲ့အပြစ်လို့သာ ခံယူလိုက်ကြပါတော့။
65လမ်း သိပ္ပံလမ်းနားက ရပ်ကွက်မှာတော့ ယူမယ့် သူမရှိလို့ တဲ့ဗျား။
မလိုတဲ့သူ က မ၀ယ်ဘဲ နေရင် လိုချင်တဲ့လူက အမြတ်ပေးစရာ မလိုဘူးပေါ့။
အခုဟာက အားလုံးမပေးနိုင်ဘဲ စပေးလိုက်တော့ မလိုအပ်တဲ့သူ က ပြန်ရောင်းစားလို့ ရအောင်
တကယ်လိုတာက တော့ အစိုးရ ဘက်ကလဲ လို တယ် ပြည်သူဘက်က လဲ လိုတာပါဘဲ။
မြန်မာနိုင်ငံက ဆင်းကဒ် ချပေးတာ ဈေးလေးကတော့ နှစ်သက်စရာပါ….
၀ယ်လို့မရဘူးဆိုတော့ ဘာလုပ်မလည်း….. ရတယ်ပဲ ထားအုံး
ဟန်းဆက် ကဇယားရှုပ်ပြန်တယ်… ဂျီဟန်းဆက်ဆိုတာတော့ ပေါးတာကို…
အဲ့သလို ဆင်းကဒ်ချပေးဖို့ စီစဉ်သူများကို မောင်မိုဘိုင်းမှ ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေဖြင့်….
မြန်မာငွေ ၁ သိန်းအထက် တန်တဲ့ ဟန်းဆက်တွေကို မြန်မာငွေ တစ်ရာ့ ငါးဆယ်နဲ့
ရောင်းချပေးပါမယ်…. အတည်ပြောတာပါ…. မြ၀တီက မောင်မိုဘိုင်းရဲ့ ဆိုင်မှာ
အိမ်ထောင်စုဇယား၊ မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ မွေးစားရင်း၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း
ရဲစခန်းထောက်ခံချက်၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက် များအပြည့်အစုံယူပြီး….
မှတ်ချက်။ ။ လက်ရှိ ၁၅၀၀ တန်ဆင်းကဒ် အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်သူများသာ။
အများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတာ ….
ဒါတောင် ဂုဏ်မယူချင်သေးဘူးလား။ :buu:
ပိုစ့်တက်လာကတည်းက ဖတ်ဖြစ်သဗျ…မန့်မယ် မန့်မယ်နဲ့ မန့်ဖြစ်တာ..
နောက်ပြီး ပိုစ့်ပါ အကြောင်းအရာ နဲ့ပတ်သတ်လို့ အခြားသော ရှုထောင့်တွေကလည်း
တခြားနေရာတွေကနေ အမျိုးမျိုး ဖတ်ရသဗျ…။ အဲ့ဒါလည်း မန့်မယ် မန့်မယ်နဲ့ …
ခုတော့ အတော်လေး စုံလာတဲ့ ကောမန့်တွေကို ဖတ်ရင်း မန့်လိုက်တာ
ဈေးနှုန်းကိစ္စ နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ ..ဒီနေရာမှာ ဆြာအုပ်နဲ့ အမြင်တူတယ် ပြောရမှာပါပဲ …။
ဆိုင်တွေက ..၁၅၀၀ တန် ကတ် ကို ၅၀၀၀၀ နဲ့ ပြန်ရောင်းပေးနေတယ် ..
၂သိန်းတန်ဖုန်းထက်စာရင်တော့ ၁သိန်းခွဲ သက်သာနေသေးတာပဲ ..။
မဖြစ်မနေ ..အသုံးလိုသူတွေ ၀ယ်မပေါ့ဗျာ ..။ ဈေးများလို့ အပြစ်တင်မှာလား …
မတင်ပါနဲ့ စောင့်ပေါ့ .. သူရို့လက်ဝယ် ရောက်တဲ့အချိန်ကနေ ၁လအတွင်း မရောင်းရရင်
(၂၅၀၀ဖိုးမသုံးရင်) ပျက်မယ် မဟုတ်လား ..။ (ဂလိုလည်းတောင့်မခံနိုင်ရင် မတောင့်ခံနိုင်သူတွေ ၀ယ်ကြပေါ့)
မမေ့စေချင်တာက ခုမှ ပထမလ နော.. နောက်လတွေ နောက်လတွေ လာဦးမယ်…
၅၀၀၀၀ ကနေ ၃၀၀၀၀ ဖြစ်မယ် ဗျာ ၁၀၀၀၀ ဖြစ်မယ်ဗျာ …။ ဒီနေရာမှာတော့ ကိုလုလင်နဲ့ သဘောညီလေရဲ့ …။
အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ Demand က အဆမတန်များနေတယ် …သို့သော် တိုးလာမှာတော့မဟုတ်…သန်း၆၀က သန်း၆၀ကိုး။
အဲ… Supply က လက်တလော မလောက်ငှ သေးပေမယ့် .. အချိန်နဲ့ အမျှ တိုးလာမယ့် သဘောရှိရဲ့…။
သည်တော့ အချိန်သာပေး ပြေလည်သွားမှာပါလို့ မြင်ပါတယ်။
တနေ့က မိတ်ဆွေ ဒါ့ပုံဆြာတယောက် စာကလေးအစာ (စပါးတွဲ) ရောင်းနေသူတဦး လမ်းသွားရင်း
ဟန်းဖုန်းပြောနေတဲ့ စနက်ပ် တပုံ တင်ထားတာတွေ့တယ်… တကယ်ပဲ ဟန်းဖုန်းတွေ မဖြစ်မနေလိုနေတာလား…
စီးပွားရေးတွေ ကောင်းနေပြီလား ကုန်စည် စီးဆင်းမှုတွေ လျှင်မြန်ချောမွေ့နေပြီလား ..ဖုန်းလေးသာရှိလိုက်..
ပိုပြီးအလုပ်တွင်ကျယ်မယ့် စီးပွားဖြစ်မယ့်လူဦးရေက ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းတုန်း.. ။ ဖုန်းဆိုတာ တကယ်တော့ မဆလာပါ။
ဖုန်း ရယ် စီးပွားရေး ၊ လူမှုေ၇းရယ်ကို မဆလာ ရယ် အသားဟင်း ရယ် လို့ မြင်ကြည့်ရင် ပြောပါတယ်..
အသား မပါဘဲ ခရမ်းချဉ်သီး ဆီသပ် ပြီး မဆလာ အုပ်တော့မလို့လား…။
ဆင်းမ် ကတ်ကို ၁၅၀၀ နဲ့ပဲ ရောင်းရောင်း ၅၂၈ နဲ့ပဲရောင်းရောင်း … ဒါက ကနဦးကုန်ကျငွေပါ… ။
လာဦးမယ် ဟန်းဆက်ခ လစဉ်ကုန်မယ့် ဖုန်းဖိုး အင်တာနက်ကြေးနဲ့ အခြားအခြားတွေ…။
လူ့သဘောအရ အရင်ကမရတာ အခုရမဟဲ့ဆို ..လိုလိုမလိုလို လုပ်ချင် သုံးချင်သူတွေ များနေတယ်ထင်ရဲ့…။
တန်းစီသူတွေကို ဖုံးစားရိတ်အတွက် တလ ဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက် ထားရှိပါသလဲ .. ဘယ်လောက် အများဆုံးသုံးမှာပါလဲ
သွားမေးရင် .. မဖြေနိုင်သူ ဟန်ကိုယ့်ပြီး ရွှီးမယ့်လူ များမယ် သေချာရဲ့…။
(အဲ့လိုနဲ့ပဲ ဆယ်စုနှစ်တွေအတော်များများ အကြပ်ပေးခံ ဦးနှောက်ဆေးခံ ဂျင်းထည့်ခံနေရတာကလား)
ဒုတိယအချက် ဖြစ်တဲ့ တန်းစီ တိုးစား ကိစ္စ …။ အဲ့ဒါက ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်နဲ့
သွားဆိုင်နေပြန်တယ်…နောက်ထပ် ..Supply & Demand Gap ကိစ္စ ဆိုပါတော့…။
ကျနော်လက်ခံထားတဲ့ အဆိုတခုက တရားဝင်ဈေးကွက်က လုံလောက်အောင် မဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အခါ
မှောင်ခို ဈေးကွက် ပေါ်ထွန်းလာပြီး သူကပဲ အမှန်တကယ် စားသုံးသူတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်
ဆိုတာပါပဲ ..(ဈေးနည်းတာများတာ တကဏ္ဍ လုပ်စားတာ မလုပ်စားတာ တကဏ္ဍပါ အနည်းဆုံးတော့ အသုံးလိုသူဆီ
အသုံးလိုတဲ့ ပစ္စည်း ငွေကြေးတစုံတရာ နဲ့ ရောက်သွားသပေါ့ …အဲ.. တန်ဖိုးဆိုတာကတော့ ပေးတဲ့သူက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်
ငွေအမောင့် နဲ့ တော့ သိပ်မဆိုင်လှ ..)
ဆိုတော့ အဲ့ဒီ့ အမြင်ကနေ ဖုန်းရှိပြီးသူတွေ ၀င်တိုးတာ … ပြန်ရောင်းစားတာ ကို ကြည့်ရင် …
သူတို့ right ပဲလေဗျာ.. ရှိပြီးသူမလျှောက်ရ တို့ ..အမှန်တကယ် မသုံးဘဲ ပြန်ရောင်းရင် ဖမ်းမယ်တို့
စည်းမျဉ်းမှ မထုတ်ထားတာ..။ မရှိသေးသူတွေ သုံးကြပါဇီ ဆိုပြီး လက်ရှောင်ပေးသူ ဆိုရင်တော့ သာဓုခေါ်ပါတယ်။
၁လုံးတော့ ရှိတော့ ရှိသကွ …နောက်တလုံးက ငါ့ သား၊ငါ့သမီးဖို့ ..(၀ါ) ပြန်ရောင်းစားပြီး မီးဖိုချောင်စရိတ်ဖြည့်တင်းဖို့
၀င်တိုးမဟ ..ဆိုတဲ့လူ တွေ့ရင်လည်း.. သာဓုမခေါ်နိုင်စေကာမူ အပြစ်တော့ သိပ်ကြီးကြီး မတင်လိုပါဘူး ..။
ဒါက ခုမှ ဖြစ်လာတဲ့ ဖက်ရှင်အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး … ၁၅သိန်းဖုန်းတွေ သိန်း ၃၀အထိ ဈေးပေါက်တဲ့ခေတ်ကို
ပြန်သွားရင် အတိအလင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီခေတ်က အဲ့သည်လောက်ဈေး ပေးဝယ်ကိုင်တဲ့လူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ
တွေးကြည့်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ကုန်သည် ဈေးသည် ၀ယ်ရောင်း ပွဲစား ..တွေပဲများတာပါ…။
(အဘတို့အမျိုးတွေကတော့ ခနထား..) …. Social Class အရပြောရရင် B, B+ or A တွေ ကိုင်ကြတာပါ….။
ဒီလူတွေက သာမန်လူတန်းစားထက် ငွေကြေး၊ ပညာအရည်အချင်း ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ဗဟုသုတ ..စတာတွေ တခုထက်
ပိုသာတဲ့ လူတွေချည်းပါပဲ …။ ဒီဈေးမတန်မှန်း သူတို့အသိဆုံး …။ နိုင်ငံတကာမှာ ဘယ်လိုမှန်း ကျောမွဲတွေထက်
သူတို့ နားအလည်ဆုံး… နားလည်နေလျက်ကနေ ၀ယ်တာပါ…။
သိန်း ၃၀ ပေးမ၀ယ်ရင် သတ်မဟ ထောင်ချမဟ ဘယ်သူမှ မပြဌာန်းထားပါဘူး။
(အလုပ်မရှိဘဲ ကြွားချင်လို့သက်သက် ၀ယ်ကိုင်တာ လူနည်းစုပါ) ဘာလို့ဝယ်သတုံး…။ အဖြေက အစွန်းရောက်ချင်လို့ပါ။
ဟုတ်တယ် အစွန်းရောက်ဖို့ … သာမန်လူတွေထက်သာဖို့ Mobile ရဲ့ တန်ဖိုး(အရည်အသွေးဖြစ်တဲ့) Everytime Everywhere
ဆိုတဲ့အချက်ကို ရယူဖို့ ။ ပိုပြီး စီးပွားဖြစ်ဖို့ ..ပိုပြီး ချောမွေ့ဖို့ .. ရှင်းရှင်းပြောရရင် သူများ(ပြိုင်ဘက်ထက်) သာဖို့ ..
ဒီလူတွေ ဒီနေ့ခေတ်ကျမှ .. အစစ်အမှန် ၁၅သိန်းခေတ်က ဘယ်လောက်ပိုပေးပြီး ၀ယ်ယူထားတဲ့ ဖုန်းဖြစ်ကြောင်းတို့…
ဆ-သ-ရ ကို တရားစွဲမယ်တို့ ပြန်အပ်မယ်တို့ ..(ဒီလူတွေ မကောင်းဘု လို့ လက်ခံထားနေလျက်ကနေ ကိုယ့်သဘော
နဲ့ကိုယ် ၀ယ်ခဲ့ သုံးခဲ့ပြီးမှဗျာ..) နောက် ရှိပါသေးရဲ့ ..အနှီဆြာတွေက ..
ညီးတို့ ၂သိန်းဖုန်း ၁၅၀၀ ဖုန်းတွေနဲ့ တန်းလာမညှိနဲ့တို့ … ရေးကြတာ ပြောကြတာ ..နည်းနည်းလွဲသလားလို့ဗျာ..
ဗန်းစကားနဲ့ ပြောရရင် ကိုယ့်ဒေါသနဲကိုယ်ပဲ .. အဲ့ဒိခေတ်က ရွှေ ၅ကျပ်သားလောက် ရင်းပြီး ကိုယ်ကိုတိုင် လိုမယ်ထင်လို့
အဲ့သည့်ခေတ် အဲ့သည့်အခါမှာ ရှာမရှား .ဖုန်းကိုင်နိုင်သူအနေနဲ့ သာမန်လူတွေထက် ဘယ်လောက် စီးပွားဖြစ်ခဲ့တယ်
ဘယ်လောက် အဆင်ပြေ ချောမွေ့ခဲ့တယ် ဆိုတာရော..ထည့်တွက်စေချင်ပါတယ်။ 99 တွေကို မမီခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်
ကြုံခဲ့တဲ့ 80 တွေ 50 တွေ ခေတ်ကို ပြန်ပြောင်းကြည့်ရင် .. ၁ရက်အတွင်းပြီးမယ် နာမည်ပေါက်ရမယ် ဆိုပြီး ပွဲခ ၁သိန်း
(နောက်ပိုင်း ၅သောင်းနဲ့) အပေါင်းအသင်းများသူတွေ အဆက်အသွယ် မိသူတွေ ..ပန်ကာထိပ်က ဇာလာဝီတွေ ..
လုပ်စားကြတာ လေး သွားသတိရတယ်။ ဆင်းမ် တကတ် သိန်း၃၀ လောက်ခေတ်ကပေါ့…အဟိ…
တပါတ် ၁-၂လုံး နဲ့ .. လက်ရှိအလုပ်က လခကိုစားလို့ အဲ့သည့် ၀န်ဆောင်မှု က ရတဲ့ငွေနဲ့ တလတလ ရွှေတကျပ်သားလောက်
အဖတ်တင်တာ အကြာကြီး …။ ဆ-သ-ရက ၀န်ထမ်းတွေလည်း နေပျော်လုပ်ပျော်တဲ့ ကာလဖြစ်မပေါ့ဗျာ..။
အဲ့.. အဲ.. ဒီဆြာတွေလည်း သူရို့ ၀န်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်လျှင်မြန်ချောမွေ့စေရေးအတွက် ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့
ဖုန်းတွေ ၀ယ်တာလည်း ၀ယ်ရတာပေါ့….. ဈေးနှုန်းသက်သက်ပဲ ဖြတ်ကြည့်ပြီး ယနေ့ခေတ် ပြောင်းလာတဲ့ ချိုလာတဲ့
ဈေးကို ဝေဖန်လို့ ထိုင်ဆဲနေတဲ့အထဲ အနှီဆြာတွေ ထိပ်ဆုံးက ပါရဲ့ …။ (ကိုယ့်ဆြာတို့ ..ကိုယ့်ဆြာတို့ ဈေးကြီးမိပေမယ့်
စီးပွားဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့ ..)
ဖုန်းပုံပြင်အဆုံးကတော့ … ဖိုးသူတော် ပြောင်းဖူးချိုးတဲ့ ပုံပြင်လိုပါပဲ …။ ဘယ်သူ့မှ အပြစ်မတင်ဘဲ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း တခုပဲ
တွေးစရာအတော်များများပေးတဲ့ ပိုစ့်လေး ဖြစ်လို့ ကျေးကျေးပါဗျို့ …
(အင်ဖရာကိစ္စ ကတော့ ကိုယွဲစီနဲ့ ဖက်ဖက်ကတ်ကို မေးပါဗျို့ …)
S@i S@i Fin K@i ရေ ဟိုဘက်ဒီဘက်ထောင့်ပေါင်းစုံက ကြည့်ပြီးသုံးသပ်သွားတာကို သဘောကျပြီး ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက တစ်ခုတည်းပါ အရောင်းစင်တာလိုမျိုး တစ်နေရာမှာ ကောင်တာတွေ ထားပြီးဖွင့်ကာလိုတဲ့သူ ၀ယ်ချင်တဲ့သူလာဝယ်စေပေါ့ဗျာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် ကန်ထရိုက်ပေးပြီး ရောင်းစေပေါ့၊ အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ဘယ်လိုလုပ်လဲ လေ့လာပြီး ဆောင်ရွက် သင့်တယ်၊ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ မြန်မာနည်းမြန်မာ့ဟန်ဟိုမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေး မှာ ခွဲတမ်းနဲ့ဘယ်လောက် ဒီမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ဘယ်လောက်အဲလို ခေတ်အဆက်ဆက် သမရိုးကျ စနစ်တွေ အကျင့်တွေကို မနှစ်သက်လို့ပါဗျာ၊ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ အရင်အရင်တွေ လိုဘဲ မှောင်ခို ဈေးကွက်ဖြစ်တာပေါ့၊ ဒီမိုစနစ်သွားချင်ရင် လူတိုင်း လူတိုင်း မိမိကိုယ်မိမိ ထိန်းကျောင်းနိုင် အောင်ပြုစုရမယ်။ အဲလို မိမိကိုယ်မိမိ ထိန်းကျောင်းဖို့အတွက် အစိုးရက ကျင့်ပေးရမယ် နည်းလမ်းတွေ ပညာပေးတွေနဲ့ ဦးဆောင်ရမယ်လေ။ ပြောခဲ့ဖူးတာတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံလို ဖြစ်ချင်လို့ ဆိုပေမယ့် ခုနပြောသလို လူတွေရဲ့ မိုင်းဆက်ကို မပြုပြင်ဘဲ အရင် လမ်းရိုးအတိုင်း ခေါင်းရှုပ်မခံ အလွယ်နည်းတွေကို ပြောင်းလဲမသုံးသရွှေ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုစနစ်သွားပေ သွားသော်ညားလည်း သွားမောပါဘဲလို့ ……….။
တသက်လုံး ဒီလိုပဲနေလာခဲ့တာ လပိုင်းနောက်ကျရုံနဲ့ ဘဝဂျီး သူများထက် အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူး။ (ပြောသာပြောတာ.. ငါဆိုရင်တော့ ရှေ့ဆုံးကတန်းစီမယ် ) သိပ်လိုချင်ရင်တော့ မှောင်ခိုဈေးပေးဂျပေါ့ဗျာ၊ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပဲဟာ… လူတွေကလည်း ဈေးကြီးတယ်သာပြောတာ လပိုင်းစောကိုင်ရဖို့ လေးငါးသောင်း အပိုပေးရလဲ တန်တယ်ထင်ကြပုံပဲ….။ မလိုရင် ပစ်ထားလိုက်.. နှစ်လ၊ သုံးလအတွင်း ဈေးပြုတ်ကျလာလိမ့်မယ်… (ကြေငြာသလို တကယ်ရောင်းပေးရင်ပေ့ါဗျာ…) အဲဒီကြမှ ယားနေတာကို ဆင်းမ်ကတ်ဝယ်ပွတ်…
ဦးကြောင်ကြီးရေ မရဘူး မရဘူး ဦးဆုံးကိုင်ပြီး ကြွားမလို့ ……… မြန်မာများများ အကြွားသန်သန် လေဗျ။
နိုဗွီတို့တော့ 1500 ကဒ်ကို
ပေါက်နေရင်တောင် ကိုယ်ဒေါ်သကိုယ်မထိန်းနိုင်ရင် 4-5သိန်းမက ကုန်သွားနိုင်တယ်
ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်အတွက် ရလိုရညား မျှော်လင့်နေမိပါသေးတယ်လို့ ……….။
ဘယ်လိုမှ လုပ်နဲ့လေ .. ဒါက ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပဲ .. :hee:
ရပ်ကွက်ထဲမှာ မဲနှိုက်လို့ ပေါက်သွားတဲ့ လူတွေ ၁၅၀၀ တန် ဖုန်း ပြန်ရောင်းတာ ၅သောင်း ရသတဲ့..
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွယ်.. ၁၅၀၀ ရင်းပြီး ၄၈၅၀၀ အသားတင် ရလိုက်တာ.. အိမ်စရိတ် တဖက်တလမ်းက ကာမိတာပေါ့.. လတိုင်း ချ ပေးမယ် ပြောထားတာ.. ဒီလ မရ နောက်လ တော့ ရမှာပေါ့.. ဆန္ဒတွေ ပြင်းထန်တဲ့ လူတွေကလည်း သူ့ ဒေါသနဲ့သူ အလိုက်ပေး ၀ယ်ကြတာ ဆိုတော့.. ဘေးကနေ ကြည့်ပြီး ငထွားလုပ်ပြီး ခါးမနာချင်ပါဘူး။
အလုပ်သမား တယောက် တနေ့ ကို ၂၀၀၀ လောက် ရတဲ့ အနေအထားမှာ ၄သောင်းကျော် အသားတင် ရတာ သူ့ အတွက် နေ့တွက်က ကိုက်လိုက်တာမှ လွန်ရော.. သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ မဲနှိုက်တဲ့ စနစ် သို့မဟုတ် တန်းစီစနစ် က နိုင်ငံတွင်းမှာ ရှိတဲ့ လူတိုင်း ရတဲ့ အခွင့် အရေး မို့.. သူတို့ကိုလည်း မလှောင်ပြောင်သင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။
ကိုယ် မလိုအပ်ရင် သွားမတန်းစီ နဲ့ မဲ မသွားမနှိုက်နဲ့.. ဘေးထိုင် ဘု ပြောပြီး အကောင်း မမြင်စိတ်တွေ ကင်းဝေး ကြပါစေ။
ဘာပဲ ပြောပြော.. လမ်းမမှာ ကားကောင်းတွေ ပေါလာပြီ တောယုံ လူတန်းစား ကိုယ်ပိုင် ကားတွေ မောင်းလာနိုင်ပြီ။ ကားတွေ များလာလို့.. နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေ ကတော့ သွားရင်းနဲ့ ရှင်းရမှာပေါ့.. လူတွေ လက်ထဲမှာ ဖုန်းတွေ တ၀ဲဝဲ ဖြစ်လာပြီ။
တိုးတက်မှုပါပဲ.. နတ်ရေကန်ထဲ ချ သလိုတော့.. ၀ုန်းဒိုင်းတော့ ဘယ်ဟာ မှ ဖြစ်မလာဘူး.. လိုချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ဖြစ်လာဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ပေးနေတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
တယောက်တည်း ဆွဲပြေးနေလို့ကတော့ ဆွဲပြေးတဲ့ လူပဲ မောမယ်.. အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ အားလုံး တက်ညီ လက်ညီ ပြေးမှ မြန်မာနိုင်ငံ ပိုတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။